Ndụmọdụ gbasara mmekọahụ na-achọ ezigbo ndị na-agwọ ọrịa na ndị dị mkpa
Ịdebanye aha gbasara mmekọrịta nwoke na nwanyị site na telifon ma ọ bụ ịntanetị
Enwere m ike na ihe mere m ji dị ka ya? Ọ bụ m bụ naanị onye nwere obi ụtọ dị otú a? Ọ na-arịa ọrịa ma ọ bụ na-emerụ ahụ, dịka m na-eche, n'ihi na adịghị m egwu mmiri na isi ihe gbasara mmekọahụ? Mkpakọrịta nwoke na nwanyị nwere ike inyere anyị aka dị ka di na nwunye ma ọ bụ dị ka mmadụ?
Mmekọahụ maka di na nwunye ma ọ bụ ndị mmadụ
Ajụjụ ndị dị otú a nwere ike ịsị na ị ga-enweta ego ahụ ma gbaa ya ọkụ n'obi. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị ghaghị ịchọta onwe gị dị ka onye na-enweghị onye ọzọ karịa nghọta ọhaneze, dịka ọmụmaatụ, dị ka ihe atụ.
Ndụmọdụ gbasara mmekọahụ maka di na nwunye
Ma ònye ga - ekwesịrị ma kwuo banyere nsogbu ndị a dị oke egwu na nke onwe ha? Oleekwa otu ị ga - esi na - eche ihu na ùgwù gị? Azịza nke a bụ na onye ọ bụla na-enye ndụmọdụ ndụmọdụ gbasara mmekọahụ.
Nkwenye nzuzo na-eme ka nchedo
N'ihi na ndụmọdụ gbasara mmekọahụ na-agụnye nkọwa kachasị anya na nkọwa kachasị nlezianya, otu ga-enwe ike ịdabere kpamkpam na ezi uche nke onye ndụmọdụ na-ahụ maka ndị na-enwe nghọta na onye maara ihe.
Nke a bụ mgbe ọ bụla ọ bụrụ na onye ọkachamara na-enye ndụmọdụ na ịgwọ ọrịa, ma ọ bụ onye ọkachamara na-ahụ maka mmekọahụ na-azụ ahịa. N'ihi na ma dọkịta ahụ na ndị ọkà mmụta sayensị ruru eru na ndị mmụta na-ahụ maka nzuzo.
Maka ndị ndụmọdụ maka onwe ha ndị na-enweghị ike igosi ogo mmụta mahadum ma ọ bụ ọkwa ọ bụla ọzọ dị mkpa, onye kwesịrị ịbụ onye nwere obi abụọ banyere nsogbu ahụ.
Biko mee nlekọta nke ndị na-akpọ onwe ha "ọkà n'akparamàgwà mmadụ". N'ihi na iwu a adịghị echebe iwu a, nke mere na onye ọ bụla nwere ike ịmegbu ya nakwa ya mere ọ ga-achọkwa. Ọ bụrụ na "ọkà n'akparamàgwà mmadụ" enweghị ike igosi ezi akara mmụta mahadum ma ọ bụ mee ka akwụkwọ ọzụzụ ọzụzụ a pụrụ ịdabere na ya - biko hapụ!
Onye ọ bụla nke na-agbaso ndụmọdụ ndụmọdụ X-Files bụ "Tụkwasị Ntụkwasị Obi" ga-enwe ekele dị ukwuu maka ohere ekwentị ekwentị ma ọ bụ nkwukọrịta Ịntanetị. N'eziokwu, mmadụ nwere ike ịnweta ndụmọdụ ndị ruru eru site na ekwentị ma ọ bụ site na ọnụ ụzọ ntanetị.
O di nwute, o siri oke ike ka onye oru a mara ihe di egwu 0190 nke na-adighi nma ma obu nke na-adighi nma. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchebe onwe gị na ọkara, google maka "ịlụ na ịntanetị", wee nyochaa nsonaazụ ọchụchọ ndị e depụtara n'ebe ahụ.
N'ezie, ndị na-achọ nchọpụta nwekwara ike ịga n'ihu, ma jikọọ na Intanet akpakọrịta, bụ nke isiokwu nke ndụ na ihe ndị pụrụ iche pụrụ iche abụghị ihe dị mma. Nke a na-ejikọta amaghị aha na nyocha. Ma ị nwere ike ịmatakwu onye ọhụụ ọhụrụ maka ihe ọjọọ ndị ahụ na-enweghị obere.
Onye na-egbu onye mmekọ | Mmekọrịta na mmekọrịta
Chetara - ihe dị ugbu a? | mmekorita
Mmekọrịta Naanị - Otu Pịa obi ụtọ | mmekorita
Mmekọrịta na ụmụaka | ezinụlọ
Ndị nne na nna chọrọ ezumike | Ụmụaka mmekọrịta
Ụdị afọ | Mmekọrịta & ịhụnanya